Si dhakhso leh oo fudud ugu hagaaji cilladaha maqaarka sawir-gacmeedka | Abuurista khadka tooska ah
Cilladaha maqaarka ku sax sawir Photoshop
Sax qaladaadka maqaarka leh Photoshop Waxay isu rogtay inay tahay majaajillada sixirka ee warshadaha moodada iyo xayeysiinta, iyadoo maareynaysa in la abuuro sawirro dad ah "kaamil ah" iyadoo la adeegsanayo aaladaha noocan ah. Photoshop Waa heer sare barnaamijka ugu fiican ee dib-u-hagaajinta sawir qaadista, waxay noo ogolaaneysaa inaan sameyno wax walba oo aan ku qiyaasi karno natiijooyin xirfad leh. Qoraalkan waxaan ku baran doonaa wax ka qabato aaladaha loo isticmaalo dib-u-hagaajinta maqaarka iyo baabi'inta cilladda (jiirarka, laalaabku ...) leh Photoshop waqtiga ayaa wali taagan maadaama ay noo ogolaaneyso inaan dib u cusbooneysiino.
Ugu horreyntii waxaan u baahanahay sawir leh nooc ka mid ah cilladda maqaarka si aan ugu shaqeyn karno Psawir. Marka aan helno sawirka waan fureynaa Photoshop waxaana bilawnay inaan shaqeeyno.
Primero, waxaan fureynaa sawirka en sawir qaade.
Markaad gasho photoshop waxaan haynaa qalab kala duwan oo noocan ah shaqada:
Burushka Bogsashada / Qalabka Cadayashada Bogsashada
Mid kasta oo ka mid ah qalabkani wuxuu na siiyaa qaab kale oo loo shaqeeyo, sirta natiijada ugu fiican ayaa ah inaan la wada ciyaarno dhammaantood marka la sameynayo sawir dib u habeyn ah.
La qalab kayd ah dhir Waxay ku shaqeysaa qaadista muunad la dhaqaajinayo iyadoo la riixayo furka alt, muunada waa inay saarnaato meel u dhow cilladda aan dooneyno inaan saxno. Waa inaan ku ciyaarnaa mad-madowga (menu-ka sare) socodka (liiska kore) iyo adkaanta burushka. Si tartiib tartiib ah ayaan u qaadeynaa shay-baarayaal waxaanna ka codsaneynaa keydka aagga aan dooneyno inaan saxno.
Ikhtiyaar kale oo lagu saxo cilladaha maqaarka ayaa ah qalab balastar. Qalabkan fmidow xulasho, waxaan samaynaa a xulista khaladaadka aan rabno inaan saxno ka dibna waxaan u wareejineynaa tilmaamaha aag u dhow maqaarka oo aan lahayn nooc ka mid ah cilladaha. Waxaa lagugula talinayaa inaad muunado ka qaadatid meel u dhow si looga fogaado isbedelada iftiinka iyo hooska.
Qalabka balastarku wuxuu leeyahay laba ikhtiyaar: isha iyo halka loo socdo. ka xulashada Waxay noo oggolaaneysaa inaan nuqulo aagga aan soo xulnay, haddii si kale loo dhigo waxay noo ogolaaneysaa inaan nuqul ka dhigno bar, fin, duuduub iyo noocyada kale ee cilladaha maqaarka. Xulashada isha, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad doorato oo aad hagaajiso aagagga cilladaysan.
Burushka qariya si fiican ayuu u shaqeeyaa la mid ah keydka loo yaqaan 'clone buffer'. Qalabkan waxay noo ogolaaneysaa inaan hagaajino aagaga oo aan ka gudubno aagga si loo saxo, sidoo kale waa suurtogal in la soo ururiyo shaybaarka sida keydka loo yaqaan 'clone buffer'.
Si loo awoodo in la saxo dhamaan cilladahaas maqaarka iyadoo la adeegsanayo aaladahaan waxaan kaliya u baahanahay inaan bedelno isticmaalkooda maxaa yeelay mid waliba wuxuu bixiyaa fursado kala duwan The talinta waqtiga shaqada waa inbadan ku ciyaar madadaalada, socodka iyo adkaanta burushka.
Marka aan si cad u ogaanno hawlgalka qalabkan, waxaan adeegsan doonaa miiraayaal taxane ah maqaar jilicsan oo aan iin lahayn. Waa inaan nahay xulasho ee aagga aan dooneyno inaan si siman u leenahay ka hor intaadan dalban miirayaashaan.
Si loo dalbado miirayaashaan marka hore waa inaanu kala xulno aaga aan rabno inaan ka shaqeyno, kiiskan waxaan ku xulannaa maqaarka iyadoo la isticmaalayo Qalabka maaskaro ee degdegga ah. Qaabkan xulashada ayaa noo oggolaaneysa, sida burushka, inaan sameyno a xulasho sax ah oo raaxo leh. Hawlgalkeedu waa mid aad u fudud, marka hore waxaan gujineynaa astaanta si aan u dhaqaajino, ka dib waxaan doorannaa aaladda burushka oo aan bilowno xulashada. Marka xulashada la dhammeeyo, kaliya waa inaan mar labaad siinnaa astaanta maaskaro, mar dambe rinjiyeynta ayaa loo beddelayaa xulasho. Si aan u dhammeyno waxaan tagnaa menu-ka sare (xulashada-rogaal-celinta) si aan u rogin xulashada oo aan u awoodno inaan ku dabakhno isbeddelada kaliya aagga la xushay.
Aan aadno menu sare (filter) waxaanan raadineynaa gaussian blur, Waxaan codsaneynaa jilicsan jilicsan illaa aan kaheleyno maqaar nadiif ah.
Si aan u dhammeyno, waxaan codsaneynaa shaandhe kale taas oo ujeedkeedu yahay in maqaarka la siiyo wax yar oo dhab ah laakiin aan muujinayn cilladahaas aan hadda tirtirnay, tan awgeed waxaan ku eegaynaa liiska ugu sarreeya (filter) Boodhka iyo xoqida, Waxaan codsaneynaa filter aad u jilicsan illaa aan ka helno maqaar leh faahfaahin qaar.
Waxay kuxirantahay sawirka, waa inaanu ku dabaqnaa taxane ah qiimayaal kala duwan mid kasta oo ka mid ah qalabka aan isticmaalno, taas oo ah sababta ay muhiim u tahay in la barto sida loo xakameeyo aaladahaas ka dibna loo dhameystiro farsamada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Cilladaha maqaarka ku sax sawir Photoshop